1 Daaroob iyo hawiyo
4 Madaxda Aduunka
SANADKA 2000: “Innagu ma ihin kuwa halaagga dib ugu noqda, laakiin waxaynu nahay kuwa rumaysad leh”
Xooji iimaankaaga. Rafaadku rumaysadkeenna buu daciifin karaa. La socodka kuwa xun rumaysadkeenna buu daciifin karaa. Shayddaanku wuxuu rabaa inuu iimaankeenna daciifiyo. Siduu iimaankeenna u daciifiyo Shayddaanka inta badan wuxuu isticmaalaa jirrabaad iyo cadaawaad. Rumaysadku wuxuu ka tirsan yahay midhaha ruuxa Ilaahay. Haddii aan rumaysad leenahay, waan ku kalsoon nahay inuu Ilaahay ballamihiisa fulin doono. Waxaan rumaysadkeenna xoojin karnaa markaan si joogta ah Erayga Ilaahay u akhrisanno. Hadduu iimaankeenna daciif yahay jirrabaadda si fudud baan ugu dhici karnaa. Laakiinse markaan iimaan run ah qabno, Ilaahay wuu ina caawiyaa.
How Significant Is the Year 2000?
Daaroob iyo hawiyoEdit
Montreal, Kanada, waxay martigelisay Mosaiculture International Montreal 2000 (MIM 2000), bandhiggii ugu horreeyay ee farshaxan- ubaxeed caalami ah. Mawduuca "Meelaha waa Mosaic," farshaxanno ka socda 14 waddan ayaa lagu martiqaaday inay naqshadeeyaan oo ay dhisaan ilaa boqol bandhig oo ubax ah.
Diyaarada Kenya Airbus 310 oo kasoo duushay Xeebta Foolmaroodi kuna wajahneyd Nigeria ayaa ku dhacday Badweynta Atlaantigga, waxaana ku dhintay 179 qof.
88 qof ayaa ku dhintay shilka diyaaradeed ee Alaska Airlines 261 oo ka dhacay xeebta California.
Kadib 22 sano oo ay haysteen ciidamada Israel ayaa ka baxay koonfurta Lubnaan.
Dhulgariir ka dhacay jasiiradda Enggano ee dalka Indonesia oo u dhow Sumatra ayaa waxaa ku dhintay 103 qof.
Itoobiya iyo Ereteriya ayaa ku heshiiyey intii ay socdeen wada-hadallada nabadeed ee Aljeeriya in la soo gabagabeeyo heshiis lagu soo afjarayo dagaalkii xadka ee u dhexeeyay.
49 qof ayaa ku dhintay shilka diyaarada Xi'an Y-7 ee magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha, oo ay ku jiraan 7 qof oo dhulka ku sugnaa.
60 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo nooceedu ahaa Alliance Air 7412 oo ka dhacay magaalada Patna ee dalka Hindiya, 5 ayaa ku dhaawacmay.
Diyaaradda Concorde ayaa ku burburtay meel u dhow magaalada Paris – diyaaradda ayaa burburtay 2 daqiiqo kadib markii ay ka kacday hotelka Hotelissimo ee Gonesse. 119 qof ayaa ku dhintay doonida, halka afar ay ku dhinteen.
Weerar bambaano oo ka dhacay wadada hoose ee Pushkin Square ee magaalada Moscow, ayaa waxaa ku dhintay 13 qof, waxaana ku dhaawacmay 118 qof.
Doontii Nukliyeerka ee Ruushka "Kursk" ayaa ku degtay gunta hoose ee badda Barents, in ka badan 150 km Murmansk oo qoto dheer 107 m.
143 qof ayaa ku dhintay burburka diyaaradda Gulf Air Airbus A320 ee xeebaha Bahrain.
Ciyaaraha Olombikada xagaaga ee Sydney.
Xarunta Dhaqanka Muslimiinta ee King Fahad ayaa laga furay Buenos Aires oo ah masaajidka ugu weyn Koonfurta Ameerika.
Doonta rakaabka ee Giriiga ee MS Express Samina ayaa ku degtay xeebta jasiiradda Paros; 80 qof ayaa ku dhintay.
Garoonka diyaaradaha ee Taoyuan ee Taoyuan, Singapore Boeing 747 ayaa isku dayday in ay ka kacdo haad khaldan waxayna ku dhufatay baabuur halkaas taagnaa; 83 qof ayaa ku dhintay 96 kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Hawlgalkii ugu horreeyay ee muddada dheer ee Soyuz TM-31 ee maned ee Saldhigga Caalamiga ah (ISS) ayaa bilaabmay.
44 qof ayaa ku dhimatay diyaarad An-26 oo ku burburtay meel u dhow Mona Quimbundo ee dalka Angola.
155 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay waddo tareen oo ku taal magaalada Kaprun ee dalka Austria.
309 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay hoolka qoob ka ciyaarka ee magaalada Luoyang ee dalka Shiinaha.
22 qof ayaa ku dhintay in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo xiriir ah oo ka dhacay caasimadda dalka Filibiin ee Manila
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro 2000.
↑ Living Mosaics in Montreal
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=2000&oldid=224709"
Last edited on 24 Nofeembar 2021, at 23:15
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Nofeembar 2021, marka ee eheed 23:15.